चीनले कोरोनाबाट छुट्कारा पाएलगत्तै डब्लूएचओले दियो फेरी यस्तो डरलाग्दो चेतावनी, विश्व नै त्रसित — Sanchar Kendra
चीनले कोरोनाबाट छुट्कारा पाएलगत्तै डब्लूएचओले दियो फेरी यस्तो डरलाग्दो चेतावनी, विश्व नै त्रसित
काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोरोनाभाइरसको केन्द्रविन्दु (इपिसेन्टर) अब युरोप भएको चेतावनी दिएको छ । चीनको वुहानबाट विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रमख चपेटामा अब युरोप परेको डब्लूएचओले जनाएको छ ।
‘युरोप अब विश्वव्यापी कोरोनाभाइरस महामारीको केन्द्रबिन्दु हो’, विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रमुख डा. टेडरोज आध्यनोम गेब्रेयेसोसले भने, ‘मानिसहरुको जीवन बचाउन आक्रामक उपाय अबलम्बन गर्न जरुरी छ। ‘यो भयानक आगो फैलन दिनु हुँदैन ।’
गत डिसेम्बर ३१ मा चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोनाभाइरसको संक्रमण १ सय ४५ देशमा देखिएको छ । संक्रमणबाट १ लाख ४५ हजार ६ सय ३८ जना बिरामी परेका छन् ।
संक्रमित हुने ८० हजार ८ सय २४ जना चिनियाँ नागरिक छन् । बाँकी अधिकांश संक्रमित युरोपियन मुलुकका छन् । चीनमा संक्रमणको दर कम हुँदै गए पनि युरोपेली मुलुकमा डढेलोझैं फैलिदा डब्लूएचओले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
चीनमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोरोनाभाइरसका कारण १३ जनाको मृत्यु हुँदा अन्यत्र ४ सय ४२ जनाको मृत्यु भएको छ । ४ सय ४२ जनामध्ये अधिकांश युरोपकै छन् ।
यस्तै नेपाल सरकारले कोरोना रोकथामका लागि विभिन्न १९ वटा निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयअनुसार अब हवाइ मार्गबाट नेपाल आउने सबैले १४ दिने क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने भएको छ। साथै तेस्रो देशका नागरिकले भारतको भूमि हुँदै नेपाल पस्न नपाउने भएका छन्। नेपाली कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रम स्वीकृति अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ। पढ्न विदेश जाने विद्यार्थीका लागि अप्रिल ३० नो अब्जेक्सन लेटर नदिने भएको छ।
यस्ता छन् सरकारले गरेका निर्णय
१ नेपाल आगमन विन्दुमा विदेशीहरूलाई दिइँदै आएको अन अराइभल भिसाको व्यवस्था १४ मार्च २०२०को राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी अप्रिल ३० २०२० सम्मका लागि स्थगन गर्ने। २ यसपूर्व भिसा लिइसकेका विदेशीहरूले नेपालको आगमन विन्दुमा आइपुग्ने मितिभन्दा बढीमा सात दिनभित्रको स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र आगमन विन्दुको अध्यागमन कार्यालयमा पेश गर्ने व्यवस्था लागु गर्ने।
३ अति जुरूरी कारणबाट नेपालमा यात्रा गर्नु पर्ने व्यवस्थाका विदेशीले सम्बन्धित मुलुक वा नजिक रहेका नेपाली नियोगहरूबाट नेपाल आइपुगुने मिति भन्दा बढीमा सात दिनभित्रको स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र सहित भिसा आवेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने।
४ गैर आवासीय नेपालीहरूलाई गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्रका आधारमा आगमन विन्दुमा दिइँदै आएको अन अराइभल भिसा १४ मार्च २०२० को राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी ३० अप्रिल २०२० सम्मका लागि स्थगन गर्ने। अत्यावश्यक कारणले नेपाल आउनुपर्ने अवस्थामा नेपाल आइपुग्नु पर्ने मितिभन्दा बढीमा सात दिनभित्रको स्वास्थ्य जाँच प्रमाणपत्र संलग्न गरी सम्बन्धित मुलुक वा नजिकमा रहेको नेपाली नियोगहरूबाट भिसा लिनुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने।
५ मार्च १४ २०२० देखि नेपाल प्रवेश गर्ने विदेशीहरूले सेल्फ क्वारेन्टिनमा र नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीले होम क्वारेन्टिनमा १४ दिनसम्म बस्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने।
६ कूटनैतिक र अफिसियल भिसा प्राप्त विदेशीहरू पहिलो पटक नेपाल प्रवेश गर्दा वा बाहिर यात्रा गरी नेपाल फर्किँदाको अवस्थामा १४ दिन सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने व्यवस्था लागु गर्ने।
७ व्यवसायिक अध्ययन र कामदार भिसा प्राप्त गरेका विदेशीहरू विदेश यात्राबाट नेपाल फर्केपछि १४ दिन सेल्फ क्वारेन्टिनमा बस्नु पर्ने व्यवस्था लागु गर्ने।
८ विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक यात्रा नगर्न र विदेशमा रहँदा उच्च सतर्कता र सावधानी अपनाउन अनुरोध गर्ने।
९ तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूलाई स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न दिइँदै आएको सुविधा १४ मार्च २०२० राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी ३० अप्रिल २०२० सम्मका लागि स्थगन गर्ने।
१० नेपाल भारतबीचको यात्रु आवागमनलाई व्यवस्थित गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा गृह मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी निश्चित विन्दुहरूबाट मात्र यात्रु आवागमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
११ अर्को सूचना नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि दिइने श्रम स्वीकृति स्थगन गर्ने। १२ अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूलाई ३० अप्रिल २०२० भित्र विदेश यात्र गर्ने गरी नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट जारी नगर्ने।
१३ संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अति आवश्यक पर्ने औषधी, औजार तथा उपकरणलगायतका सामग्रीहरू सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष परिस्थितिको प्रावधानअनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खरिद गर्ने।
१४ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमण रोकथाम, निदान र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसियू तथा आइसोलेसन कक्षसहितको विशेष पूर्वाधार काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यक संख्यामा र हरेक प्रदेशमा कम्तीमा १-१ वटा विकास गर्न विस्तृत प्रस्ताव तयार पारी समितिको अर्को बैठकमा पेस गर्ने। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने।
१५ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी समायोजन भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्ने।
१६ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न मेडिकल तथा ननमेडिकलहरूको सूची तयार गरी व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिने।
१७ नेपालमा पर्वतारोहण गर्ने गरी सन् २०२० को वसन्त ऋतुका लागि जारी गरिएका वा जारी गरिने अनुमति पत्र हाललाई स्थगित गर्ने। १८ नेपालमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन समारोहहरूलाई मे ३१ २०२० सम्मका लागि स्थगित गर्ने।
१९ संक्रमणबाट जोगिन ठूलो संख्यामा मानिसहरू भेला हुने सिनेमा हल, सभा समारोह, सामाजिक कार्य एंव मेला महोत्सव सहभागी नहुन आमजनसमूदायलाई आह्वान गर्ने।
कोरोना भाइरस विश्वव्यापी महामारीः विश्व स्वास्थ्य संगठन- विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) लाई विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको छ। तीन महिनाअघि सुरू भएको यो नयाँ कोरोना भाइरसबाट संसारभर हजारौं संक्रमित भएपछि बुधबार संगठनले महामारी घोषणा गरेको हो।
चीन र कोरियामा बिस्तारै कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या कम हुँदै गएको छ। साथै ५७ देशमा दस वा योभन्दा कम संक्रमित पुष्टि भएका छन्। टेड्रोसका अनुसार अहिलेसम्म देखिएका कोरोना भाइरसका प्रकारमध्ये यही ‘कोभिड-१९’ मात्र महामारी घोषणा भएको हो। यसअघि सार्स, मर्स नामक कोरोना भाइरसले पनि धेरै मान्छेको ज्यान लिएको थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुरूमा ‘कोभिड-१९’ यसरी फैलिएला भन्ने आकलन नगरेकाले महामारी घोषणा गर्न नखोजेको पनि टेड्रोसले बताएका छन्।’अब यो अनियन्त्रित भयो भनेपछि महामारी किन नभन्ने?,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन्।
जुन प्रकारले कोरोना भाइरस संसारका विभिन्न देशहरुमा पनि फैलिरहेको छ । त्यो भन्दा पनि यस भाइरससंग सम्बन्धित विभिन्न भ्रमहरु फैलिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा यो रहस्यमय भाइरसको बारेमा दिन-दिनै नयाँ-नयाँ कुराहरु उत्पन्न हुन थालेका छन् । जस्तै- के अत्याधिक चिसो अथवा बरफले यो भाइरसलाई नष्ट गर्न सकिन्छ ? के तातो पानीले नुहाउँदा यो भाइरसबाट बच्न सकिन्छ ? के चीनबाट आयत हुने उत्पादनहरुबाट पनि भाइरस फैलने खतरा हुन्छ ? विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरससंग सम्बन्धित सम्पुर्ण भ्रामक तथ्यहरुको विस्तृत जवाफ दिएको छ ।
कोरोना भाइरस एकदम चिसोका कारण नष्ट हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले त्यस्तो भ्रममा विश्वास गनुको कुनै कारण छैन भनेको छ । चीसालेे कोरोना भाइरस अथवा अन्य कुनै भाइरस नष्ट हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा राम्रो तरिका भनेको बारम्बार अल्कोहल युक्त ह्यान्डवास अथवा साबुन र पानीले हात सफासंग धुनु पर्छ ।
त्यस्तै तातो पानीले नुहाउदा कोरोना भाइरससंग बच्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा सामान्यतया मानिसको शरीरको तापक्रम ३६.५ डिग्री सेल्सियस देखि ३७ डिग्री सेल्सियससम्म हुन्छ । यस्तो स्थितिमा तातो पानीले नुहाएर कोविड-१९ भाइरसले बच्न सकिंदैन । त्यस्तो प्रकार दावी अर्थहीन हो । धेरै तातो पानीले नुहाउँदा यसले तपाइर्ंलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ ।
के चीनीयाँ उत्पादनहरुले पनि कोरोना भाइरस फैलन सक्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा चीन अथवा अन्य कुनै देशमा निर्मित उत्पादनहरुले कोरोना भाइरस फैलने कुनै खतरा हुँदैन । कोरोना भाइरस कुनै सतहमा केही घण्टा अथवा केही दिनसम्म मात्र बाँच्न सक्छ भन्ने कुरा सतहमा नै निर्भर हुन्छ ।
कुनै पनि उत्पादन जुन लगातार घुमिरहेको छ अथवा अन्य देशका निर्यात गरिरहेको छ, त्यस्तो उत्पादनहरुबाट यो भाइरस फैलने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ । सामान आयात र निर्यात हुने क्रममा भिन्दा-भिन्दै तापक्रम र मौसमको सामना गर्नु पर्छ, जसका कारण भाइरस बाच्ने सम्भावना न्युन हुन्छ । यदि तपाईंलाई सामानहरुको सतह दूषित छ भन्ने लाग्छ भने यसलाई कीटाणुनाशकले राम्रोसंग धुन सक्नु हुन्छ ।
के लामखुट्टेबाट पनि कोरोना भाइरस फैलन सक्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै सूचना अथवा प्रमाण फेला परेको छैन । कोरोना भाइरसले शरीरको श्वास प्रणालीमा हमला गर्छ । कोरोना भाइरसबाट ग्रसित व्यक्तिले जब खोक्छ अथवा हाछ्यूँ गर्ने क्रममा थुकको अति नै सुक्ष्म थोपाको माध्यमबाट कोरोना भाइरस वरपर रहेका मानिसहरुको शरीरमा फैलन्छ । यस बाहेक र्‍यालको माध्यमबाट पनि यो भाइरस फैलिन्छ । त्यसैले कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि त्यस्ता व्यक्तिहरुबाट टाढा रहनु पर्छ, जसले हाछ्यूँ अथवा खोकी रहेको छ ।
के हृयान्ड ड्रायरले कोरोना भाइरस मर्छ भन्ने ? प्रश्नका जवाफमा यसले कोरोना भाइरस नष्ट गर्न कुनै किसिमको प्रभावकारी भुमिका हुँदैन । अल्कोहलयुक्त हृयान्डवासबाट हात बारम्बार सफा गर्ने अथवा साबुन पानीले राम्रोसंग हात धुनु नै सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । हात धोएपछि हृयान्ड ड्रायर्स अथवा टिश्यू पेपरको माध्यमले हात पुछ्न सक्नु हुन्छ ।
अल्ट्रा भ्वाइलेट डिस-इन्फेक्सन ल्याम्प (पराबैजनी कीटाणुनाशक ल्याम्प)ले कोरोना भाइरसलाई मार्न सक्छ ? भन्ने प्रश्नमा हात अथवा शरीरका कुनै पनि अन्य अंगहरुलाई किटाणुरहित राख्नका लागि हल्ट्रा भ्वाइलेट डिस-इन्फेक्सन ल्याम्पको प्रयोग गर्नु हानिकारक हुन सक्छ । यो छालाका लागि हानिकारक हुन सक्छ । कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्तिको पहिचानका लागि थर्मल स्क्यानर कतिको प्रभावकारी हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा थर्मल स्क्यानर पूर्ण रुपमा प्रभावकारी हँुदैन ।
थर्मल स्क्यानरले त्यो बेलामा मात्र कोरोना भाइरसको पहिचान गर्न सक्छ, जब कुनै व्यक्तिलाई इन्फेक्सनका कारण ज्वरो आएको हुन्छ अथवा उसको तापक्रम सामान्य भन्दा बढि भएको हुन्छ । थर्मल स्क्यानर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित ती व्यक्तिहरुको पहिचान गर्न सक्दैन, जसलाई ज्वरो आएको हुँदैन । त्यस्तो हुनुको मुख्य कारण भनेको कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि स्वास्थ्य बिग्रन र ज्वरो आउन दुईदेखि १० दिनको समय लाग्छ ।
सम्पूर्ण शरीरमा अल्कोहल अथवा क्लोरीन छर्केर भाइरसबाट बच्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नमा त्यस्तो गर्दा भाइरसबाट बच्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । जुन भाइरस पहिला नै तपाईंको शरीरमा प्रवेश गरिसकेको हुन्छ, यस प्रकारको छर्केने प्रक्रियाले त्यो मर्दैन । त्यसो गर्नाले लुगा अथवा तपाईंको शरीरलाई नोक्सान पुर्‍याउन सक्छ । यदि उचित मात्रा अथवा दिशानिर्देश अनुसार प्रयोग गरियो भने क्लोरीन अथवा अल्कोहल कुनै पनि सतहको कीटाणुरहित गर्न सहयोगी हुन्छ ।
के घरपालुवा जनावरहरुबाट कोरोना भाइरस फैलन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा हङकङमा एक महिलाबाट उसको घर पालुवा कुकुरलाई कोरोना भाइरस फैलिएको खबर अगाडि आएको छ । त्यसैले मानिसहरुबाट घरपालुवा जनावरहरुबाट कोरोना भाइरस फैलने खतरा छैन भन्न सकिंदैन । तर पशुहरुबाट मानिसमा कोरोना भाइरस फैलिएको बारेमा अहिलेसम्म कुनै सूचना प्राप्त भएको छैन । अहिले नै घरपालुवा जनावरले कोरोना भाइरस फैलन सक्छ अथवा सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा कुनै दावी गर्न सकिंदैन । यस्तो अवस्थामा आफ्नो हात निरन्तर सफा गर्नु आवश्यक छ । हात धुनाले कोरोना मात्र हैन घरपालुवा जनावारबाट मानिससम्म पुग्न सक्ने विभिन्न किसिमको अन्य भाइरसबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
के निमोनियाबाट बचाउने भ्याक्सिन कोरोना भाइरसमा पनि प्रभावी हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा निमोनियाको भ्याक्सिन कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि कुनै भुमिका छैन । यो भाइरस अत्यन्त नयाँ र भिन्दै किसिमको छ । त्यसैले सर्वेक्षणकर्ताहरु यसको लागि विशेष प्रकारको भ्याक्सिन पत्ता लगाउनका लागि जुटेका छन् । अहिले स्वास-प्रस्वास सम्बन्धि रोगबाट बचाउने भ्याक्सिनलाई कोरोना भाइरससंग बचाउनका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
के लहसुनको सेवनले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा विभिन्न औषधिको गुणहरु भएको लहसुन स्वास्थ्यका लागि अति नै लाभदायक छ । तर त्यस्तो कुनै प्रमाण अहिलेसम्म उपलब्ध भएका छैनन्, जसले लहसुनको सेवन गर्नाले कोरोना भाइरसबाट बच्न सक्ने प्रामाणित भएको छैन ।
के कोरोना भाइरसले वृद्धाहरुलाई मात्र हमला गर्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा कोरोना भाइरसले कुनै पनि उमेरका मानिसहलाई आफ्नो शिकार बनाउन सक्छ । तर पहिलेबाट नै दम, मधुमेह, मुटु सम्बन्धि समस्या आदिबाट ग्रसित व्यक्तिहरु र वृद्धाहरुलाई यो भाइरबाट धेरै खतरा हुन सक्छ । भाइरसको चपेटामा आउनाले त्यस्ता व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य झन विग्रन सक्छ । त्यसैले सबै उमेरका व्यक्तिहरुले यो भाइरसबाट बच्नका लागि आवश्यक कदम उठाउनु पर्छ ।
के एन्टीबायोटिक कोरोना भाइरस उपचार अथवा बचावमा सहयोगी साबित हुन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तरमा एन्टीबायोटिकहरुले केवल ब्याक्टेरियाबाट मात्र बचाउँछ । भाइरसबाट बच्नमा यसको कुनै भुमिका रहँदैन । कोविड-१९ एउटा भाइरस हो , त्यसैले एन्टीबायोटिकको प्रयोग यसबाट बच्न अथवा यसको उपचारका लागि गरिंदैन । तर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिलाई अस्पताल भर्ना हुँदा उसलाई एन्टीबायोटिक पनि दिइन्छ । किनभने कोरोना भाइरस संक्रमणको क्रममा उसलाई ब्याक्टेरियल इन्फेक्शनको धेरै खतरा हुन्छ ।
कोरोना भाइरसको उपचारका लागि कुनै औषधि छैन ? भन्ने प्रश्नमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै विशेष औषधि उपलब्ध छैन । तर यस भाइरसबाट संक्रमित विरामीहरुको विभिन्न अस्पतालहरुमा अन्य सहयोग औषधिहरुको माध्यमले उपचार गरिरहेको छ । धेरै विरामीहरुलाई सपोर्टिभ केयरमा राखिएको छ । भाइरसबाट बचावका लागि औषधि र भ्याक्सीन तयार गर्नका लागि सर्वेक्षणकर्ताहरुले दिनरात काम गरिरहेका छन् । छिटटै कोरोना भाइरसको औषधि पत्ता लाग्ने छ भन्ने सबैको अपेक्षा रहेको छ ।
बेलायती महारानी एलिजाबेथका श्रीमानको निधन
कोरोना निको भएकामध्ये एक तिहाइ मान्छेहरुमा देखियो यस्तो गम्भीर समस्या, के भन्छन चिकित्सक ?